ဒီဇယ်လျှပ်စစ်မီးစက် PATCO KOOP
လျှပ်စစ်မီးစက်, ဒီဇယ်လျှပ်စစ်မီးစက်, မီးစက်အသေး, မီးစက်အလယ်
အသေးမှ အလယ်အထိ အရွယ်အစားရှိသောမီးစက်ဖြစ်ပါသည်။ မီးစက်များသည် စွမ်းအင်ကို အလင်းပေးသည်။ အရွယ်အစား2လိုင် (နှင့်)3လိုင်း 4.5 KVA မှ 11 KVA အထိ ရှိပါသည်။ အသံထိန်းသေတ္တာအမျိုးအစား (နှင့်) အသံမထိန်းအမျိုးအစားတို့အဖြစ် အမျိုးအစား နှစ်မျိုးလုံးရှိသည်။ အသီးသီးနေရာတွင်အလင်းလိုအပ်သောအိမ် (သို့မဟုတ်) လျှပ်စစ်မီးသုံးစွဲသည့်နေရာအတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရန် အလွယ်တကူပြောင်းရွှေ့နိုင်သည်။
လျှပ်စစ်မီးစက်မော်ဓယ် KDF 6700XE / Q KDF 7500XE / Q KDF 8500XE / Q
ဒိုင်နာမို Self-excitation, brush
လျှပ်စစ်ဖိအား ပြောင်းစနစ် (V) 230 V., 1 phase2Lines
အမြင့်ဆုံးမီးပါဝါ [KVA] 50 Hz.55.5 6.5
60 Hz. 5.567
ပုံမှန်အသုံးပြုသည့်မီးပါဝါ [KVA] 50 Hz. 4.556
60 Hz.55.5 6.5
တိုက်ရိုက်စနစ် (DC) 12 V. 8.3 A.
မြန်မှုန်း (ကြိမ်/မိနစ်) 3000
အင်ဂျင်မော်ဒယ် KD186FAE KD188FAE KD192FE
ဆလင်ဒါအရွယ်အစား 0.418 L. 0.456 L. 0.499 L.
ဆလင်ဒါ x လေဖြတ်ချိန် 86 X 72 ml. 88 X 75 ml. 92 X 75 ml.
အင်ဂျင်ပါဝါ 10 HP @ 3600 rpm 12 HP @ 3600 rpm 14 HP @ 3600 rpm
ျမန္မႈန္း Governor Mechanic
စက်အမျိုးအစား ဒီဇယ်အင်ဂျင် တိုက်ရိုက်မျိုး 1 စုပ်4ခု
အအေးစနစ် လေအားဖြင့် အအေးပေးစနစ်
စက်ဆီအသားတင်ပမာဏ 1.65 L.
စက်ဆီအမျိုးအစား SAE10W30 တူညီ (သို့) ပိုကောင်း
လောင်စာဆီတိုင်ကီအရွယ်အစား [L] XE: 12.5, Q: 14.5 L. XE: 12.5, Q: 30 L.
စက်ဆီသုံစားနှုန်း 275(Gram/Kilo Watt/Hour)
စက်ဖွင့်နေသည့်အခါ သံအကျယ်7မီတာ 77 / 72 Decibel
သုံးစွဲမှုအတွက် မီးပလပ်ကိရိယာ2Positions
အရွယ်အစား XE: 740*505*630, XE: 740*505*630,
(အရှည် x အကျယ် x အမြင့်) [mm.] Q: 910*530*740 Q: 910*530*840
အသားတင်အလေးချိန် XE: 113, Q: 149 XE: 114, Q: 151 XE: 124, Q: 171
စည်းပုံအမျိုးအစား XE: open Type, XE: open Type,
Q: Canopy Q: Tall Canopy
ဒိုင်နမို MECC ALTE (နှင့်) ဒိုင်နမို YANAN ကုန်ပို့လွှာရယူရန်
ဒီဇယ်အင်ဂျင် KOOP ကုန်ပို့လွှာရယူရန်